Mutengesi Akaunti Ekutengesa Kuwedzera - Aplus Global Ecommerce
Kukurudzira Kutengesa mu e-commerce bhizinesi iri bhora rakatosiyana mutambo pane bhizinesi risiri pamhepo. Kubva pane yakajeka uye yechokwadi mutengi mhinduro kune yako yekutenga bhokisi, kune akasiyana maficha ekushambadzira pamhepo ari akaomesesa. Zvakare, kukwikwidza kunotyisa kubva kumabhizimusi matsva ari kubuda kunoita kuti nzira iyi ive nenjodzi. Hunhu hwakasimba pamisika yepamhepo inoda nzira itsva uye dzekugadzira dzekukura kwakasimba mukutengesa. Pamusoro peizvozvo, iyo mitemo mune e-Commerce nhandare inoramba ichichinja neiyo nyowani tekinoroji uye inokurumidza-kuwedzera vatengi base. Kune ese aya zvikonzero mabhizinesi anowanzo kuda rutsigiro kusimudzira kutengesa uye kuita purofiti
Iwo ekutengesa uye ekushambadzira marongero pa Plus Global Ecommerce vanokwanisa mukusimudzira kutengeswa kwemakambani mazhinji e-Commerce kuburikidza nemakore avo ezviitiko mumunda. Isu tinobatsira maakaunzi eAmazon kuwedzera kutengesa nekubatsira muminda iyi:
Kukunda iro bhokisi rekutenga
Chigadzirwa Peji Zvemukati Optimization
Mutengo uye kudzikisira optimization
Vatengi vanobata matipi
Iyi minda ndizvo zvinhu zvikuru zvinoona kutengesa mubhizinesi. Kudzora zvinhu izvi kunogona kuratidza kuva chishandiso chine simba kudzora kutengesa zvakare.